I-zodiac ngumthetho ngokwento ethi yonke into ibekho, ihlale okwethutyana, emva koko idlule ngaphandle kobukhoyo, iphinde ivele ngokwezodiac.
Vol. 5 I-Meyi, 1907. 2
UKUZALWA — UKUFA — UKUFA — UKUZALWA.
AKUKHO bikho kufa ngaphandle kokuzalwa, okanye ukuzalwa ngaphandle kokufa. Kuko konke ukuzala kukho ukufa, kwaye kuko konke ukufa okuzalwa.
Ukuzalwa kuthetha ukutshintsha kwemeko; ngokunjalo nokufa. Ukuze umntu azalelwe kweli lizwe, umntu ofayo kufuneka afe kwihlabathi elivela kulo; ukufa kulomhlaba kuzalwa kwelinye ilizwe.
Kuluhambo oluya kwizizukulwane ezingaphaya kwamananiyo ubuze ephindandaphinda, "Sivela phi? Siya phi? ”Eyona mpendulo bayivileyo ibe ngu-ewe kwimibuzo yabo.
Ukusuka kwiingqondo zokucingisisa kuza neminye imibuzo engamawele, "Ndiza njani? Ndihamba njani? ”Oku kongeza imfihlakalo ngakumbi kwimfihlakalo, kwaye ke umxholo uphumle.
Ngelixa sidlula kwindawo yethu yethunzi abo bayaziyo okanye abo babenendawo yokuma kwelinye icala elingaphaya bathi umntu angazisombulula iziphikiso kwaye aphendule imibuzo ephathelele kwikamva lakhe ngomzekeliso wexesha elidlulileyo. Ezi ngxelo zilula kangangokuba sibamamele kwaye sibakhuphe ngaphandle kokucinga.
Kulungile ukuba asinakusombulula imfihlakalo. Ukwenza njalo kungonakalisa isithunzi sethu ngaphambi kokuba siphile ekukhanyeni. Nangona kunjalo sinokufumana umbono wenyaniso ngokusebenzisa umzekeliso. Singabamba "apho siya khona?" Ngokujonga ngokujonga "Sivela phi?"
Emva kokubuza imibuzo engamawele, "Ndivela phi kwaye ndibuya phi?" Kwaye "Ndihamba njani? Kwaye" Ndihamba njani? "Kuza umbuzo ovusa umphefumlo," ndingubani? "Xa umphefumlo ubuzibuza ngokunyaniseka le nto. umbuzo, awusayi kuphinda waneliswe lude ube uyazi. “Mna! Mna! Mna! Ndingubani? Ndilapha? Ndivelaphi? Ndiyaphi? Ndiza njani? kwaye ndihamba kanjani? Nangona kunjalo ndiza okanye ndigqitha emajukujukwini, okanye ixesha, okanye ngaphaya koko, njalo, rhoqo, ndihlala ndikho, ndim ndedwa! ”
Ngobungqina kunye nokujonga, umntu uyazi ukuba weza ehlabathini, okanye umzimba wakhe ubuncinci, ngokuzalwa, kwaye uyakuphuma kwihlabathi elibonakalayo ngokufa. Ukuzalwa sisango elikhokelela kwihlabathi kunye nokungena kubomi behlabathi. Ukufa luphume emhlabeni.
Intsingiselo evunyiweyo ngokubanzi yegama "ukuzalwa" kukungena komzimba ophilayo, olungiselelwe umzimba ungene kwihlabathi. Intsingiselo evunyiweyo ngokubanzi yegama elithi "ukufa '' kukuyekiswa komzimba ophilayo, olungelelanisiweyo wokudibanisa ubomi babo kunye nokugcina umbutho wabo.
Oku, wethu, umhlaba, kunye neatmosfera yawo yobume obungapheliyo bungoku nje njengechaphaza elihamba kwindawo engenasiphelo. Umphefumlo uvela kwaphakade, kodwa ulahle amaphiko ayo kunye nenkumbulo yayo ngelixa uvela kumhlaba omdaka womhlaba. Ifikile emhlabeni, ilibale ikhaya layo lokwenene, ibuyiselwe yimikhono yayo kunye nomzimba wenyama yangoku, ayikwazi ukubona ngaphaya kwelinye icala langoku. Njengentaka eyaphuke amaphiko ayo, ayikwazi kuphakama kwaye inyuke iye kwinto yayo; kwaye ke umphefumlo uhlala apha umzuzwana, ubanjiwe ngamalahle enyama ngexesha lehlabathi, ungazithembi izinto zangaphambili, uyoyika ikamva-elingaziwayo.
Umhlaba obonakalayo umi phakathi kweento ezimbini ezingapheliyo njengethiyetha enkulu kanaphakade. Izinto ezingabonakaliyo kunye nokungabonakaliyo apha zinokuba zizinto ezibonakalayo nezingabonakaliyo, ezingabonakaliyo nezingenakubonwa zithatha ifom ebonakalayo, kwaye okungapheliyo apha kubonakala kusemdeni njengokuba ungena kumdlalo wobomi.
Isibeleko yiholo apho umphefumlo ngamnye uzifaka ngokwawo kwisinxibo senxalenye yaso emva koko uziqalise ngokwawo kuloo mdlalo. Umphefumlo ulibale elidlulileyo. Ukuncamathisela, ukupeyinta, impahla, iimpahla zenyawo kunye nokudlala kwenza umphefumlo ulibale ukuba ungonaphakade, kwaye ugxunyekwe kubuncinci bomdlalo. Inxalenye yayo ngaphezulu, umphefumlo ukhululiwe kwizambatho zayo nganye nganye kwaye iphinde yangeniswe kwakhona kwaphakade ngomnyango wokufa. Umphefumlo unxiba imiwunduzo yenyama ukuze ungene ehlabathini; indawo yayo ngaphezulu, iyabeka kwezi ngubo zishiya umhlaba. Ubomi bangaphambi kwendalo yinkqubo yokuthenga iimpahla, kwaye ukuzala linyathelo eliya kwinqanaba lehlabathi. Inkqubo yokufa kukususa kwaye udlulise ukubuyela kwihlabathi leenkanuko, iingcinga okanye ulwazi (♍︎-♏︎, ♌︎-♐︎, ♋︎-♑︎) apho sivela khona.
Ukwazi inkqubo yokungazihluphi, kufuneka sazi inkqubo yokufaka imaski. Ukwazi inguqu ngexesha lokudlula kwehlabathi, kufuneka sazi ngenguquko ngelixa liza emhlabeni. Ukwazi inkqubo yokuhlikihla okanye ukubeka iimpahla zomzimba, umntu kufuneka azi ngandlela yimbi ye-physiology kunye ne-physiology yokukhula kwesibeleko.
Ukusukela ngexesha lokuprinta de kufike ixesha lokuzalwa kwilizwe lenyama imvelo yokuphindukuzalwa ichaphazela ulungiselelo lwezambatho zayo, kunye nokwakhiwa komzimba wayo oyakuhlala kuwo. Ngeli xesha i-ego ayiyoyokwasemzimbeni, kodwa inxibelelana nomama ngokusebenzisa iimvakalelo kunye nokuva, nokuba kukukholelwa ngokuzithemba ukulungiswa nokwakhiwa komzimba wayo okanye ikwimeko yephupha. Ezi meko ziqwalaselwa luphuhliso lwangaphambili lwe-ego ngokwamandla kunye namandla ayo.
Umphefumlo ngamnye uphila kwihlabathi elahlukileyo elilelakhe, kunye nelokwenza kwaso, elinxulumene nalo okanye lazichazayo. Umphefumlo wakhela umzimba wenyama ngaphakathi nangaphakathi kwinxalenye yawo ukuze ube ngumphambukeli kunye namava kwilizwe lomzimba. Xa umphambukeli ophelayo uyawucoca umzimba wenyama ngenkqubo ebizwa ngokuba kukufa nokubola. Ngelixa nasemva kwale nkqubo yokufa lilungiselela eminye imizimba apho inokuhlala khona kwizinto zomhlaba ezingabonakaliyo kulomhlaba wenyama. Kodwa nokuba kukwilizwe elibonakalayo okanye kwihlabathi elingabonakaliyo, umntu ophinda azalwe ngokutsha akaze abe lihlabathi lakhe okanye kwinqanaba lesenzo.
Emva kobomi nje bokuphelisa i-ego ibangela ukuba imizimba yenyama inyibilike, ichithwe kwaye iconjululwe kwimithombo yayo yendalo ngumzimba, ikhemikhali, imililo engasasebenziyo, kwaye akusalanga nto emzimbeni wenyama ngaphandle kwentsholongwane. Le ntsholongwane ayibonakali ngamehlo enyama, kodwa ihlala ngaphakathi kwihlabathi lomphefumlo. Ifuzisela umzimba wenyama, le ntsholongwane ibonakala njengokuvutha, nokutsha kwamalahle ngexesha lokufa kunye nokubola komzimba wenyama. Kodwa xa izinto zomzimba zisonjululwe kwimithombo yazo yendalo kunye nokuphindukuzalwa kwakhona sele kudlulile kwixesha lokuphumla kwayo intsholongwane iyayeka ukutshisa kunye nokuqaqamba; ngokuthe ngcembe iyancipha ngokobukhulu ide ekugqibeleni ibonakale ngathi sisixhobo esitshisiweyo sokucoca umbala otyhidiweyo. Iyaqhubeka njengenkcenkce ye-ashy kwindawo efihlakeleyo yomhlaba womphefumlo ngalo lonke ixesha lokuzonwabisa kunye nokuphumla kwe-ego. Eli xesha lokuphumla laziwa ziinkolo ezahlukeneyo njenge "Izulu." Xa liphelile ixesha lezulu kwaye umlo ulungiselela ukuphinda uzalwe ngokutsha, isixhobo esitshisiweyo, njengeyona ntsholongwane yobomi bokwenyama, uqala ukuqaqamba kwakhona. Iyaqhubeka ukuqaqamba kwaye icace ngakumbi njengoko kuziswa kubudlelwane bemagneti nabazali bayo bexesha elizayo ngumthetho wokuqina.
Xa ixesha seligalelekile lokuba intsholongwane yomzimba iqalise ukukhula ukukhula komzimba ungena kulwalamano olusondeleyo nabazali bayo bokamva.
Kwinqanaba lokuqala lobuntu izithixo zahamba emhlabeni nabantu, kwaye amadoda alawulwa bubulumko boothixo. Ngala maxesha ubuntu babedibanisa kuphela ngamaxesha athile kwaye ngenjongo yokuzala izidalwa. Ngala maxesha kwakubakhona ubudlelwane obusondeleyo phakathi kwe-ego eyayilungele ukwenzeka emzimbeni kunye ne-egos eyayiza kubonelela ngomzimba wenyama. Xa imvo yokulingana yayilungele kwaye ivumile ukubhengeza umzimba yazisa ukulungela kwayo ngokubuza kwabo bohlobo lwayo kunye noku-oda ababephila kwihlabathi elibonakalayo ukuba balungiselele umzimba ongokwasemzimbeni. Ngokwemvume yokuba indoda nenkosikazi basondela baqala ikhosi yokulungiselela kunye nokukhula okoko de kube kukuzalwa komzimba. Ukulungiswa kubandakanya uqeqesho oluthile kunye nochungechunge lwezinto zonqulo ezazithathwa njengezicocekileyo kwaye zingcwele. Babesazi ukuba babezakuphinda benze kwakhona imbali yendalo kwaye bona ngokwabo babeza kusebenza njengoothixo phambi kobukho bomphefumlo wendalo iphela. Emva kococeko oluyimfuneko kunye noqeqesho lomzimba nengqondo kunye nexesha elithile kunye nexesha elifanelekileyo kwaye libonakaliswe nguloo mntu wokwenza umzimba, isiko elingcwele lomanyano wesakramente lwenziwa. Ke ukuphefumla komntu ngamnye kudityaniswe kumlo ofana nedangatye, elidala umoya ojikeleze isibini. Ngexesha lesiko lokudibana komanyano, intsholongwane ebengezelayo yomzimba wexesha elizayo yadubuleka kwinqanaba lomphefumlo we-ego yangena kwinqanaba lokuphefumla kwesibini. Intsholongwane idlule njengombane kwimizimba yabo yomibini kwaye yabangela ukuba bachukunyiswe njengoko ithatha imbonakalo yelungu ngalinye lomzimba, emva koko yazibeka esibelekweni somfazi yaza yaba ngumxokelelwano obangele ukuba iintsholongwane ezimbini zesini zingene ngaphakathi enye-i-ovum engafakwanga. Emva koko kwaqala ukwakhiwa komzimba owawuza kuba yinto yehlabathi yomzimba.
Le yayiyindlela yobulumko obugweba uluntu. Ke ukuzalwa komntwana kwakuhanjwa ngezo ntlungu zabelenzi, kwaye abantu emhlabeni babazi abo babezakungena. Akunjalo ngoku.
Inkanuko, ubungqingili, ukulala ngesondo, inkanuko, imilo, ziinkokheli ezikhoyo zamadoda ngoku ezinqwenela umanyano lwezesondo ngaphandle kokucinga ngezidalwa ezinobubi ezingenayo ehlabathini ngeendlela zazo. Amaqabane angafezekanga kule mikhwa luhanahaniso, inkohliso, ubuqhetseba, ubuxoki kunye nobuqhetseba. Zonke ezi zinto zizinto ezi zibangela inkxwaleko, ukugula, izifo, ubugxwayiba, ubuhlwempu, ukungazi, ukubandezeleka, uloyiko, umona. ukuphelelwa lithemba nokufa. Kwaye ayingobantu basetyhini bohlanga lwethu kuphela abava iintlungu ngokuzala, kwaye bobabini abantu besini baphantsi kwezifo zabo ezizodwa, kodwa ii-egos ezingenayo, ezinetyala lezono ezifanayo, banyamezele ukubandezeleka okukhulu ngexesha lokuphila kunye nokuzalwa kwangaphambili. (Bona Mhleli, Ilizwi, Umq. I-5, No. 1, iphe.97.)
Intsholongwane engabonakaliyo evela kumphefumlo womphefumlo ingcinga kunye noyilo lwe-archetypal ngokwendlela eyakhiwe ngayo imizimba yokoqobo. Intsholongwane yendoda kunye nentsholongwane yomfazi zizinto ezisebenzayo nezithandekayo zendalo ezakha ngokwendlela yoyilo olungabonakaliyo.
Xa le ntsholongwane ingabonakaliyo ivela endaweni yayo kwihlabathi lomphefumlo kwaye idlulile kumlo wokuphefumla kwesibini esidibeneyo kwaye ithathe indawo yayo esibelekweni idibanisa iintsholongwane ezimbini zesibini, kwaye indalo iqala umsebenzi wayo wokudala .
Kodwa intsholongwane engabonakaliyo, nangona ingekho endaweni yayo kumhlaba womphefumlo, ayinqunywanga kwihlabathi lomphefumlo. Xa ushiya umhlaba womphefumlo i-germ ekhazimlayo engabonakaliyo ishiya umkhondo. Lo mzila uyakhazimla okanye uthambile, ngokobunjani bomntu oya kuphila emzimbeni. Umzila uba ngumtya odibanisa iswele elingabonakaliyo kunye nomphefumlo womphefumlo. Intambo edibanisa intsholongwane engabonakaliyo kunye nomzali wayo idityaniswa yimingxunya emine ngaphakathi kwe-sheath ezintathu. Ngokudibeneyo zibonakala njengentambo enye; ngombala ziyahlukahluka kubukhaphukhaphu, ubunzima obukhokelela kuhambo olukhanyayo negolide, uphawu lokucoceka komzimba kwinkqubo yokwenziwa.
Le ntambo ibonelela ngemijelo edluliselwa kwisibeleko yonke imithambo kunye notyekelo lweempawu, njengoko zingeniswa emzimbeni kwaye zihlala njengembewu (skandas) ukuqhuma kwaye zithwale isiqhamo njengoko ukukhula komzimba ebomini, kunye neemeko zilungiselelwe ukubonakaliswa kolu tyekelo.
Imitya emine eyenza intambo zizitshaneli ezidlula kuwo izinto ezibuthathaka, umbandela we-astral, ubomi ngobomi, kunye nomnqweno womcimbi, wokuba wenziwe kumzimba wosana olungekazalwa. Ngama-sheaths amathathu ajikeleze imitya emine udlulisela umba omphezulu womzimba, oko kukuthi, eyona nto ingumongo wamathambo, izinzwa kunye namadlala (imana), umqukumbelo (buddhi), kunye nomgaqo wentsholongwane (atma). Imitya emine idlulisa umba oyintsingiselo yolusu, iinwele kunye nezikhonkwane (sthula sharira), izicubu zenyama (linga sharira), igazi (prana) kunye namafutha (Kama).
Njengombandela wokuba lo mbandela ugxunyekwe kwaye uvavanyiwe kuveliswa ngaphakathi kuvakalelo oluthile lomama kunye nokuthambekela, umzekelo, njengomnqweno wokutya okuthile, iimvakalelo zangxamiseko kunye nokuphuma, imizwa engaqhelekanga kunye nokulangazelela, utyekelo lwengqondo lwenkolo, ubugcisa, umbongo kunye nembala yeqhawe. Sigaba ngasinye esibonakalayo siyimpembelelo ye-ego esasazwayo kwaye idluliselwe emzimbeni we-fetus ngomzali wayo womzimba-umama.
Kumaxesha amandulo utata wayedlala eyona ndima ibalulekileyo ekukhuleni kwesibeleko kwaye wazikhusela ngononophelo kulo msebenzi njengoko wenzayo umama. Kumaxesha ethu amanyala ulwalamano lukatata kwisibeleko luyetyeshelwa kwaye alaziwa. Kuphela kungokwemvelo, kodwa ngokungazi, ngamana ngoku angaziphatha ngokufanelekileyo isimo sengqondo somfazi sokukhula kwesibeleko.
Sonke isibhalo esiyinyani kunye ne-cosmogony ichaza ukwakhiwa komzimba wenyama ekukhuleni kwakhe ngokuthe chu. Ke, kwiGenesis, ukwakhiwa kwehlabathi ngeentsuku ezintandathu yinkcazo yokuphuhliswa kwesibeleko, kwaye ngosuku lwesixhenxe iNkosi, u-Elohim, abakhi, baphumle kwimisebenzi yabo, njengoko umsebenzi wawugqityiwe kwaye umntu wamiswa ngokomfanekiselo wabadali bakhe; Oko kukuthi, kwilungu ngalinye lomzimba womntu kukho amandla ahambelanayo kunye nomzimba kwindalo leyo, ongumzimba kaThixo, kwaye izidalwa ezithatha inxaxheba ekwakhiweni komzimba zibotshelelwe kuloo nxalenye ziyakhileyo. kufuneka iphendule kuhlobo lomsebenzi leyo inxenye iyalelwe yi-ego eyenzelwe ukuba yenziwe.
Ilungu ngalinye lomzimba liyisixhobo sokutsala okanye sokugada ngamandla emvelo. Njengoko i-talisman isetyenziswa amandla aya kuphendula. Umntu ngokuqinisekileyo incinci le miccosm enokuthi ibize i-macrocosm ngokokwazi okanye ukholo, ukwenza kunye nentando yomfanekiso wakhe.
Xa i-fetus igqityiwe, kukwakhiwa kuphela komzimba ngokwesahlulo esixhenxe senziwe. Eli lilizwe eliphantsi nje lomphefumlo. Kodwa i-ego ayikabikho emzimbeni.
Isibeleko, xa sigqibeleleyo kwaye siphumle, sishiya umhlaba waso wobumnyama, isibeleko, size sife kuso. Kwaye oku kufa kwesibeleko kukuzalwa kwakhe kwihlabathi lokukhanya lokukhanya. Ukuphefumla, irhasi kunye nokukhala, kwaye ngokuphefumla, umoya wento oqala ukwenzeka emzimbeni kwaye uzelwe ngaphakathi kwaye ubonakaliswa yindawo yengqondo yomzali wakhe ngaphezulu komphefumlo. Imvo, nayo, iyafa emhlabeni wayo kwaye izalelwe kwaye ingene kwihlabathi lenyama.